कोरोना रोक्‍नका लागि मेडिकल सामग्री र चिकित्सक टोली पठाउन चीन तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना रोक्‍नका लागि मेडिकल सामग्री र चिकित्सक टोली पठाउन चीन तयार
चाहिने कुराको व्यवस्थित सूची माग
चैत्र ५, २०७६ दुर्गा खनाल, जगदीश्वर पाण्डे
काठमाडौँ — कोरोना भइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि आफ्नो मुलुकमा सफलता हासिल गर्दै आएको छिमेकी मुलुक चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालका लागि के–के सामग्री र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसबारे व्यवस्थित माग राख्न चीनले भनेको हो ।
भाइरस प्रभावित अन्य मुलुकहरूलाई सहयोगको मात्रा बढाइरहेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्नका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चीनले सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता चीनबाट आएको छ । त्यस्तै भाइरसको संक्रमण घट्नेबित्तिकै नेपालले चाहे चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन पनि अरूभन्दा पहिले खुला गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि नेपालले चाहेको समयमा गति दिन तयार रहेको सूचना चीनले पठाएको छ ।
‘यस्तो गर्ने हो भने तुरुन्त माग होस्, हामी तत्पर छौं भनेर चिनियाँ पक्षबाट हामीलाई आश्वासन आएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर लागेका छौं र आवश्यक पर्ने सबै खालका सहयोग लिन्छौं ।’
केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच पनि कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा पनि पनि सहयोग गर्ने विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भएको थियो । ‘उहाँहरूले सहयोगका लागि तत्परता देखाउनुभएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरूको असल अभ्यासबाट कसरी सिक्ने भन्ने नै हो । दोस्रोचाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दा सामग्रीहरूमा सहयोग गर्ने कुराहरू हुन्, त्यसमा कुराकानी भइरहेको छ ।’
चीनले कोरोनाबाट अत्यधिक प्रभावित इटाली र स्पेनमा मेडिकल टोलीसहित स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरिरहेको छ । युरोपको सबैभन्दा प्रभावित मुलुक इटालीको राजधानी रोममा केही समयअघि चीनले विमान चार्टर गरेर नौ सदस्यीय मेडिकल टोली पठाएको थियो । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग र चीनकै रेडक्रस सोसाइटीले सात हजार भेन्टिलेटर र मोनिटरसहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री इटालीलाई सहयोग गरेको छ ।
नेपालमा संक्रमण फैलिए अहिलेका अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर र मेडिकल कीटलगायतको व्यापक अभाव हुने आकलन छ । त्यसैले त्यस्ता सामग्री खरिद प्रक्रिया र विदेशी सहयोगबाट समेत जोहो गर्ने सरकारी तयारी छ । त्यही तयारीअन्तर्गत चीनले गरेको सहयोगको प्रस्तावबाट सरकार उत्साहित छ । यसअघि चीनमा संक्रमण बढेका बेला नेपालले एक लाख थान मास्क पठाएको थियो । नेपालको उक्त सहयोगप्रति चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पनि प्रशंसा र आभार व्यक्त गरेका थिए । अहिले नेपालमा जोखिम बढ्ने सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चीनले आफ्नोतर्फबाट पनि गुन तिर्न खोजेको हो ।
‘असल छिमेकीको हिसाबले हाम्रो क्षमताअनुसार हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौं,’ चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालबाट के–के कुरा चाहियो भन्ने प्रस्ताव पठाएपछि त्यसको आधारमा हामी सहयोग पठाउँछौं ।’
केही दिनअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि कोरोनाविरुद्ध साझा प्रयास अघि बढाउने सहमति भएको थियो । आठवटै मुलुकहरूबीच गत आइतबार भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि साझा कोष बनाउने सहमति पनि भएको थियो । उक्त कोषमा भारतले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सार्क राष्ट्रसँगको संयुक्त प्रयास भए पनि चीनले भने आफ्नो छिमेकी सम्बन्ध आधारमा नेपाल केन्द्रित सहयोगको इच्छा देखाएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सार्कको विपत् व्यवस्थापन कोषमा रहेको पैसा पनि अहिले भइरहेको महामारीको नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
‘यो अस्थायी समस्या हो, स्थायी फाइदा लिने गरी प्रस्ताव नल्याउनुहोस्’
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको अहिलेको प्रयास कति मजबुत छ ?
हामीले सकेसम्म सबै खालको प्रयास गरिरहेका छौं । यो बीचमा हामीले आठवटा बैठक गर्‍यौं । समन्वय समितिबाट काम भइरहेको छ । सर्वदलीय बैठकमा सबै पार्टीहरूबाट साझा प्रतिबद्धता आएको छ । प्रदेशहरूको समस्या पनि हामीले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सुनेका छौं । आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समितिबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।
तपाईंले डाक्टर र विज्ञहरूसँग मंगलबार छलफल गर्नुभएको थियो, के सुझाव दिए ?
बीएसथ्री ल्याबहरू बढाउनुपर्‍यो भन्ने छ । अहिले केन्द्र एउटा (टेकु अस्पताल) मात्र छ । यसलाई सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्याम्पल कलेक्सन सेन्टरलाई बढाउने र डिटेक्सनमा ध्यान दिनुपर्‍यो भन्ने सुझाव छ । होम र सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई नियमन गर्नुपर्‍यो, एयरपोर्टको यो सिस्टमलाई सिल्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । मुभमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । अपरिहार्य आवस्थाबाहेक सामान्य नियमित चेकका लागि अस्पतालमा जाने, त्यहाँ भीडभाड नगर्ने भन्ने खालको सुझाव पनि उहाँहरूबाट आएको छ ।
प्रदेशहरूमा त एउटा गतिलो प्रयोगशाला पनि छैन नि ?
प्रदेशका लागि पनि अत्यावश्यक सामग्री, पूर्वाधार के छ भन्ने हामीले मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पनि बुझ्यौं । उनीहरूको मागअनुसार काम गर्नेछौं । प्रदेश र केन्द्रमा केही ग्याप छ भने त्यसलाई हटाएरै काम हुन्छ र भइरहेको छ । बीएसथ्री ल्याब सात प्रदेशमै सञ्चालन गर्नेमा सरकार सकारात्मक छ ।
फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई के व्यवस्था छ ?
सुरक्षाका सबै उपाय अपनाइएको छ । उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने इन्सेन्टिभ दिने भन्ने निर्णय नै भइसकेको छ ।
धेरै मुलुकमा सामग्रीको अभाव छ । अत्यावश्यक सामग्रीहरू नेपालले कहाँबाट ल्याउँछ ?
चीनले हामी जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर छौं भनेर भनेको छ । जस्तै, चीनले ऊर्जा सहयोग गर्न, मास्क तथा अन्य मेडिकल सामग्रीसहित मेडिकल टिम पठाउन आवश्यक छ ? भनेर सोधेको छ । संक्रमण रोकिएपछि नेपालमा चीनका पर्यटक पहिलो पर्यटक हुनेछन् भन्नुभएको छ । त्यस्तै नेपालले आवश्यक ठानेको समयमा चीनले नेपालका पूर्वाधारहरू निर्माणका कामलाई गति दिन चाहन्छौं पनि भनेको छ । के आवश्यक छ, तुरुन्तै माग होस्, हामी तत्पर छौं भनेका छन् ।
सार्कका मुलुकहरूबीचमा आइतबार भिडियो कन्फरेन्स भएको छ । भारत सरकारले रकमको घोषणा पनि गर्‍यो । त्यसका बाबजुद सार्कको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पनि अहिले रकम छ । त्यसलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारतका तर्फबाट विशेष सहयोग हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो ।
इक्युपमेन्टहरूको सन्दर्भमा डब्लूएचओ र सम्बन्धित एजेन्सीहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । भेन्टिलेटरहरू पनि उपत्यका भरिमा एक सयवटाभन्दा पनि रहेनछन् । त्यही बेलामा खोजी हुने हो । सामग्री ल्याउने सन्दर्भमा हामीलाई आवश्यक पर्दा जुन देशमा छ, त्यहींबाट ल्याउने हो । यहाँबाट यसरी आउने भन्ने छैन । तर सम्भावित ठाउँहरूको अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउँछ ।
संक्रमणको जोखिम भित्रिन नदिन सावधानी अपनाउँदा सबै उद्योग व्यवसाय चौपट भयो, राहत प्याकेज दिनेबारे केही सोचेको छ ?
हामीले औषधि उद्योग संघका प्रतिनिधिहरूसँग कुराहरू गरेका छौं । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका कुरा गर्नु भएको छ । उनीहरूलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था भएका छन् । हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूबीचमा पनि कुरा गर्‍यौं ।
मैले भनिदिएको छु, तपाईंहरूका समस्याहरू के–के हुन् ? सूची बनाएर ल्याउनुहोस्, सरकारले के गरिदिनुपर्‍यो ? यो–यो समस्या हो भन्नुपर्छ । यो अस्थायी समस्या हो तर यही बेला स्थायी फाइदा लिने गरी प्रस्ताव लिएर चाहिँ उहाँहरू आउनु हुँदैन । सरकारबाट प्याकेज पाउनका लागि उहाँहरूबाट ठोस रूपमा प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि के गर्ने भनेर अघि बढ्ने हो ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०६:५०
ढोकैमा साबुन पानी
कोराेनाबाट बच्‍न ग्रामिण बस्तीमा ब्युँतियो पुरानो चलन । भन्छन्- ‘पहिला हातखुट्टा र मुख धुनुस, अनि मात्रै भित्र’
चैत्र ५, २०७६ जितेन्द्र साह
मोरङ — ‘यहाँ बाल्टिनमा पानी, जग र साबुन राखिदिएको छु,’ घरमा आउनेलाई सुकमाया चौधरी भन्ने गर्छिन्, ‘पहिला हातखुट्टा र मुख धुनू, अनि भित्र पस्नू ।’
तीन दशकदेखिकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मोरङको महेशपुरकी ५४ वर्षीया चौधरी पाहुनालाई मात्रै होइन, परिवार र छिमेकीलाई पनि साबुन–पानीले हातमुख धुन लगाएपछि मात्र घरभित्र जान दिन्छिन् । व्यक्तिगत सरसफाइको यो काइदा उनले सानी छँदा बुबाआमा र छरछिमेककाले गरेको देखेकी थिइन् । बस्ती बढ्दै जाँदा र सहरीकरणको हावाले छुँदै जाँदा यो चलन हराएको थियो । अहिले त्यही पुरानो चलन उनले कोरोना भाइरसविरुद्धको सतर्कतास्वरूप आफू जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन प्रयोगमा ल्याएकी छन् ।
‘ऊबेला घरको द्वारमा यसैगरी बाल्टिनभरि पानी र जग राख्ने चलन थियो, कतैबाट आउँदा हातखुट्टा तथा मुख पखालेर मात्र भित्र पस्थे,’ उनले भनिन्, ‘हाटबजारमा गइन्छ, दस ठाउँ टेकिन्छ, दस जनालाई भेटिन्छ, बाहिरका फोहोर र कीटाणु घरभित्र नपसुन् भनेर यसो गर्ने चलन थियो ।’
चौधरीका अनुसार बिर्सिसकेको पितापुर्खाको संस्कृतिलाई कोरोना भाइरसको त्रासले सम्झाएको छ । ‘आफ्नो स्वास्थ्यका छरछिमेकलाई यसैगरी द्वारमा एक डोल (बाल्टिन) पानी, जग, मग र साबुन राख्न लगाइरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘घर बाहिरै धारा र चापाकल भएकाले एउटा साबुन राखिदिए पुग्छ ।’
अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट यसबारे बस्तीवासीले प्रशिक्षण र जानकारी नपाएको चौधरीले बताइन् । ‘सञ्चारमाध्यमबाट यो भाइरसबारे थाहा पाएको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘जति मैले ज्ञान पाएकी छु, त्यसअनुसार गरिरहेकी छु । अरूलाई पनि गर्न लगाइरहेको छु, हातखुट्टा धोएर मात्र घर छिर्ने र ओछ्यानमा बस्ने सल्लाह दिइरहेको छु ।’
बस्तीमा कसैलाई रुघा, ज्वरो र झाडापखाला लागेमा अस्पताल पठाउने गरेकी छन् । ‘कोरोना भाइरसकै संक्रमण नभए पनि अहिलेको बेला रुघा लागेमा लापरबाही गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउँछु,’ उनले भनिन् । बितेका दुई साताको अवधिमा उनले आफ्नो बस्तीमा सामान्य रुघा लागेका एक नाबालकसहित चार जनाले अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर घर फर्केको बताइन् ।
चौधरीका अनुसार बस्तीका सबै जना सफा र स्वस्थ छन् भने हात मिलाउँदा र छुँदा पनि समस्या हुन्न, मास्क पनि लगाउनु पर्दैन । ‘हात जोडेर हिँड्दैमा समस्याको समाधान हुन्न, भेट हुने दुवै व्यक्तिको हात सफा छ, स्वस्थ छन् भने हात मिलाउँदैमा केही फरक पर्दैन,’ उनले भनिन् ।
उक्त बस्तीका नाउ ५५ वर्षीय लखिराम ठाकुरले कपालदाह्री काट्दा व्यक्तिपिच्छे पानी र ब्लेड फेर्ने गरेको तथा हात धुने गरेको बताए । ‘ंभाइरसको डरले हाम्रो व्यापार पनि कम भएको छ,’ उनले भने, ‘तर नाउहरू पनि जानकार भएकाले ग्राहक डराउनु पर्दैन ।’
कटहरी–१, जमटोकी बस्तीकी ५२ वर्षीया गौडा माझीले अचेल हरेक दिन पक्की घरको सतहमा पोछा लगाउने र माटोको आँगनलाई गोबरले लिपपोत गरिरहेको बताइन् । ‘उहिलेदेखि कतैबाट आउँदा हाम्रो परिवारजनमा हातखुट्टा धोएर मात्र घरमा छिर्ने बानी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले घर, फर्निचर तथा ओछ्यान पनि सफा रहन्छ, राति सुत्ने बेलामा हातखुट्टा पनि चिलाउँदैन ।’
मोरङको धनपालनाथ–६, दादरवैरियाका किसान कपिल राजवंशीले व्यक्तिगत सरसफाइलाई हल्का रूपमा लिने असभ्य जीवनशैली भएकालाई र उनीहरूकै कारण अरूलाई संक्रमण भइरहेको बताए ।
‘पहिलेको जमानामा गाडीघोडा थिएन, हाम्रा पुर्खा पैदलै हिँडेर घर फर्कंदा धूलोमैला हुन्थे, घरको द्वारमा राखेको डोलको पानीले हातखुट्टा र मुख धुन्थे, अनि घरभित्र छिर्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त शयनकक्ष, स्नानगृह, भान्छा र शौचालयभित्रै धाराको व्यवस्था छ तैपनि यो भयावह समस्या देखियो ।’
हात धुने र सरसफाइमा पानीको प्रयोग गर्ने पूर्वीय संस्कृति महामारी फैलिनबाट रोक्ने एक परम्परागत उपाय हुन सक्ने चिकित्सकहरूको बुझाइ छ ।
‘यो कुनै अनुसन्धानसिद्ध तथ्य त होइन तर दक्षिण एसियामा कोरोना संक्रणको ढाँचा र अन्य मुलुकमा यसको ढाँचा हेर्दा पानी प्रयोग गर्ने हाम्रो चलन र उनीहरूको चलनलाई पनि दाँज्ने हो भने एउटा भिन्दै तस्बिर देखिन्छ,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘त्यो के भने, पानी कम चलाउने संकृति भएकामा भाइरसजन्य महामारी तीव्ररूपमा फैलिने गरेको छ ।’
उनका अनुसार युरोपमा एकै दिनमा हजार हजारलाई छोएको कोरोनाले भारतमा दुई संख्या नघाउन नसक्नाको कारण खोतल्ने हो भने पानी प्रयोग गर्ने पूर्वीय परम्परा देखिन आइपुग्छ ।
‘युरोपेलीहरू खाने बेलामा हात धुँदैनन्, काँटा–चम्चाले खान्छन्, चिनियाँहरू चपस्टिक चलाउँछन्, शौच गर्दा कागजले पुस्छन् जसमा जीवाणु घन्टौं बसिरहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी भने बिहान पूजापाठ गर्दा नुहाइधुवाइ गर्छौं, खाना खान अघि र पछि हात धुन्छौं, शौचालयमा पनि पानी नै प्रयोग गर्छौं, खाएपछि भाँडै पनि कति पटक माझिसकेका हुन्छौं, जसले गर्दा जीवाणु एकबाट अर्कोमा सर्ने शृंखला टुट्न पुग्छ ।’
पुनका अनुसार यसरी पूर्वीय सभ्यताको पानी प्रयोग गर्ने चलनले जानी नजानी महामारीलाई रोकथाम गर्ने अचुक काम गर्दै आइरहेको छ । आयुर्वेदले पनि पानी चलाउने बानीलाई स्वस्थ मान्दै आएको छ ।
स्वस्थ खानपिन गर्ने, अनुशासित जीवन जिउने र योग गर्नेलाई कुनै पनि खालको भाइरसको चाँडो संक्रमण नहुने मोरङकै जहदा गाउँपालिका–४ का वरिष्ठ वैद्य सुनील शाह बताउँछन् । ग्रामीण बस्तीमा देखिएको यस्तो स्वास्थ्य चेतना अनुकरणीय, उदाहरणीय र प्रशंसनीय भएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा.सुरेश मेहताले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०६:४७